10 Xeeladaha Warbaahinta Bulshada oo xoojinaya saamiga iyo isbedelka | Martech Zone
Jimco, Juun 11, 2021 Arbacada, Oktoobar 13, 2021 Rekha Pant
Ka soo horjeedka caqiidada caanka ah, suuqgeynta warbaahinta bulshada ayaa ka badan oo kaliya inay la jaan qaado qoraaladaada internetka. Waa inaad la timaaddaa waxyaabo hal-abuur leh oo saamayn ku leh - waa wax dadka ku kalifaya inay tallaabo qaadaan. Waxay u fududaan kartaa sida qof la wadaagayo boostadaada ama u beddelo beddelaad. Wax yar oo jecel iyo faallooyin ah kuma filna. Dabcan, hadafku waa in lagu faafo laakiin maxaa la sameeyaa si taas loo gaaro?
Maqaalkan, waxaan ku miisaamaynaa istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada ee xoojinaya saamiyadaada bulshada iyo beddelaadyada. Sideen ugu helnaa dadka inay wax ka qabtaan qoraaladayada? Maxaa ku kicin doona inay wadaagaan boostada? Waxaan kuu soo qoreynaa talooyin waxtar kuu leh:
Bini'aadamku wuxuu leeyahay u janjeera dabeeciga ah inuu ra'yigiisa saaro dadka kale. In kasta oo taasi u muuqan karto wax laga xumaado, waxaad u isticmaali kartaa tan si aad uga faa'iideysato oo aad u sameyso sahan! Barnaamjiyada warbaahinta bulshada waxay bixiyaan ra'yi ururin ama muuqaal sahan sidaa u isticmaal taas. Waxaad ku dhejin kartaa wax ku saabsan sida ugu fudud ee ah meesha ugu fiican ee fasaxa, waxa ay tahay inaad cabto, ama haddii ay u maleynayaan inaad timaha iska jarayso iyo in kale. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa tan inaad waxbadan ka ogaato dookhooda adoo weydiinaya midabada, howlaha ay doorbidayaan inay qabtaan, ama adeegyada ay rabaan inay yeeshaan. Waxa ugu fiican ee ku saabsan sahanada ayaa ah inay u yimaadaan sidii su'aalo si lama filaan ah markaa dadku kama cabsanayaan inay bixiyaan labadooda santuuqa.
Weydiiso inay ku soo biiraan Mudaaharaadka
Inta badan baloog -yaqaannada waxay heleen kuwa raacsan iyagoo bilaabay tartanno. Tani waxay kor u qaadeysaa joogitaankaaga internetka, oo waxaad isla markiiba heleysaa beddelaad maxaa yeelay booqdayaasha boggaagu waxay u baahan yihiin inay wax qabtaan si ay qayb uga noqdaan tartanka. Waxa kale oo aad fursaddan u adeegsan kartaa inaad kor u qaaddo boggaaga oo aad hagaajiso ma aha oo kaliya waxyaabaha la wadaago iyo saamiyada laakiin sidoo kale heerka beddelidda.
Bilaab Kalfadhiyada Su'aalaha iyo Jawaabaha
Haddii aad rabto inaad si qoto dheer u ogaato aqoontaada ku saabsan astaanta dadka soo booqda ama si aan kala sooc lahayn u dhaafi kara dhejimahaaga, qabso kulan su’aal iyo jawaab. Tani waxay u shaqaysaa maxaa yeelay haddii ay qirtaan iyo haddii kaleba, dadku runtii way jecel yihiin marka qof weydiisto ra'yigooda. Baahi gaar ah ayaa la fuliyaa marka qof ka codsado in la caddeeyo. Kani waa hab aad u fiican oo aad ku sii fahmi karto dadka ku jira shabakaddaada oo aad la timaaddo xeelado kaa caawin doona isbeddelladaada mustaqbalka.
Hel Sawiradaas Guuritaanka?
Taas waxaan ula jeednaa, soo gelinta fiidiyowyada. Sawirku wuu fiican yahay, laakiin ma dafiri karno in boqolley aad u badan oo adeegsadayaasha internetka ay aad u xiiseeyaan waxyaabaha fiidiyowga ku jira. Sida laga soo xigtay daraasad ay sameysay Baadhaha Baraha Bulshada oo aan wada ognahay Facebook, dadka isticmaala waxay cunaan boqol milyan oo saacadood daawashada fiidiyowyada maalin kasta. Ka faa'iideyso tan oo kor u qaad heerkaaga beddelidda adigoo soo gelinaya fiidiyowyo badan!
Sawirka Xisaabta: Buffer Bulsho
Haddii aad kaliya dirto usbuucii hal mar markaa layaab malahan in joogitaankaaga internetka uu hooseeyo. Waxa ugu muhiimsan ee ay tahay inaad maskaxda ku hayso waa tan: kaqeybgalkaaga warbaahinta bulshada waxay si toos ah ugu xiran tahay inta jeer ee boostadaada. Hadda, inta jeer waxay kuxirantahay barmaamijka warbaahinta bulshada ee aad isticmaaleyso. Hadday tahay Facebook, waad soo diri kartaa ugu yaraan hal mar maalintii laakiin haddii aad isticmaaleyso Twitter, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ugu yaraan hal mar dhigtid hal mar labadii saacba mar si aad u ilaaliso joogitaankaaga internetka.
Soo rar Macluumaadka
Iyada oo wax waliba si xawli ah u socdaan, dadku waxay noqdeen kuwo aan samir badan lahayn. Cunto degdeg ah ayaa si fudud looga soo qaataa cuntada wanaagsan sababtoo ah dadku mar dambe diyaar uma aha inay sugaan cuntadooda. Waxaa la mid ah waxa aan ku dhajino internetka. Haddii ay aad u hadal badan tahay, ku kalsoonow in dadku iska dhaafi doonaan. Si aad tan u xalliso, u beddel qormadaas qaab xog -ogaal ah. Metelaad muuqaal ah oo xog ah oo ah qaab tirakoobyo kala duwan, xog, ama isbarbardhig ayaa akhristayaasha aad ugu riyaaqsan yihiin, sidaa darteed xog -ururintu waa muhiim. Si aad u abuurto garaafyo, waxaad ku tuuri kartaa aaladaha sida Canva oo aad hesho dhiirigelin ku saabsan sida loo abuuro xog -ururinta oo aan kaliya soo jiidan dareenka laakiin sidoo kale kor u qaada beddelka.
Qosolku waa Daawada ugu Wanaagsan
Qof kastaa wuxuu u baahan yahay qosol wanaagsan had iyo jeer sidaa darteed u soo gal GIF animations ama memes mar kasta oo aad awooddo. Waxaad tan u samayn kartaa inaad ku qosliso qosolka boostadaada. Hadda, tani kaliya maahan in dadka laga qosliyo; sidoo kale waxay ku saabsan tahay inaad dadka tusto inaad tahay qof lagu soo dhowaan karo inaad xoogaa kaftan ah ku jirto. Dadka qosolka leh had iyo jeer way fududahay in lala xiriiro. Waxaad la yaabi doontaa sida ugu dhakhsaha badan saamiyada iyo beddelaadku u kordhayaan marka aad soo geliso meme.
U Fududee Dadka Inay Wadaagaan Qoraaladaada
Mid ka mid ah khaladaadka ugu caansan ee ay daabacaduhu sameeyaan ayaa ah inay soo rogaan waxyaabaha ayna ka filayaan dadku inay helaan halka badhanka saamigu ku yaalo. Haddii aad ku jirtid barxad warbaahinta bulshada ah ama degel internet ah, hubi in badhamadaada wadaagga bulshada ay muuqdaan.
Degdeg Markaad Kajawaabeyso Fariimaha
Hubi inaad isla markiiba ka jawaabto farriimaha iyo faallooyinka. Dadku waxay leeyihiin feejignaan hooseeya waxayna lumiyaan xiisaha marka qof waqti dheer qaato si uu uga jawaabo su'aalahooda. Adigoo ka jawaabaya farriimaha isla markiiba, waxaad siinaysaa aragti ah inaad firfircoon tahay khadka tooska ah iyo inaad u dabooli karto baahidooda wakhti kasta. Waxaad kaloo dhaqaajin kartaa jawaabaha otomaatiga ah si aad u ogeysiiso inaad aragtay farriintooda waxaadna u jawaabi doontaa isla marka aad heli karto. Taasi weli way ka fiican tahay marka la barbardhigo “la arkay” ee ku soo boodda sanduuqa farriinta maxaa yeelay taasi waxay ka dhigi doontaa inay dareemaan inaad si ulakac ah isaga indho tirayso.
Markasta Naxariis Muuji
Ka fikir xisaabaadka warbaahinta bulshada ee aad raacdo. Maxaad u raacdaa? Noqo nooca koontada warbaahinta bulshada ee aad had iyo jeer rabto inaad ka hesho warar cusub. Had iyo jeer ku lug yeelo wada sheekaysiga, kuna calaamadee dadka aad soo xigato maxaa yeelay tani waxay dareensiin doontaa inaad qiimeyso oo aad ixtiraamto. Ku dheji abuurka waxyaabaha ku jira, oo kor u qaad kuwa kale gaar ahaan haddii aad u malaynayso in shaqadoodu tahay wax ay raacayaashaadu jeclaan doonaan. Si deeqsinimo leh ula wadaag sheekooyinka, fahamka, macluumaadka, waxyaabaha qiimaha u yeelan doona kuwa raacsan. Marka aadan ka baqayn inaad kor u qaaddo dadka kale, kuwa raacsan ayaa tan dareemi doona waxayna ka dhigi doontaa inay rabaan inay la wadaagaan qoraalladaada xitaa in ka badan.
Daah-: Martech ZoneXiriiriyaha xiriirka ee Canva waxaa loo adeegsaday maqaalkan.
Tags: kor u qaad saamiyadabuffertartankakaftanimageskordhiya sheekooyinkanaxariisMacluumaadka Suuqgeyntasoo noqnoqoshada boostadafadhiyada q & Asu'aal iyo jawaabla wadaagosawirada warbaahinta bulshadajawaabta warbaahinta bulshadawadaagida warbaahinta bulshadasahan
Rekha Pant, waa xirfadle IT ah, B.Tech oo ka socda Jaamacadda RGPV, Bhopal, India. Iyada oo ay weheliso xirfaddeeda IT-da, iyadu sidoo kale waxay isu rogtay inay noqoto qoraa hufan oo ka hadlaysa mowduucyo kala duwan oo ku saabsan Isgaarsiinta Dijital ah, Waxbarashada, Suuqgeynta iyo IT-ga. Iyada oo hibo naadir ah, waxay ku daabacday qaybo blog ah oo marti ah oo marti ku ah degello badan.